Tirada u Dhimata Xannuunka AIDS oo Hoos-u-dhac ku Yimi | Maankaab.com
Dadka u geeriyooda xannuunka AIDS-ka, ayaa kala badh hoos-u-dhac ku yimi tobbankii sanno ee u dambeeyey sida ay muujisay daraasad cusub.
Tirada guud ee xannuunkan u dhimataa waxay hoos ugu dhacday hal milyan sannadkii la soo dhaafay, iyadoo 2005 ahayd dadka xannuunkan u dhintay 1.9 milyan qof sida lagu iftiimiyey warbixin ay si wada jir ah u soo saareen hay’adda Qaramada Midoobay u qaabilsan la-tacaalida HIV/AIDS ee UNaids (United Nations Programme on HIV/Aids).
Warbixintu waxa ay arrintan sabab uga dhigtay in kala badh (50%) ka mid ah dadka xannuunkan la noola ay heleen dawooyin, halka waqtigan bartilmaameedku yahay in 30 milyan oo bukaan ah helaan daawada marka la gaadho 2020-ka.
Xannuunka AIDS oo uu sababo cudur-dhaliyaha HIV-ga waxa loo aqoonsaday inuu ka mid yahay 10 xannuun ee sababa dhimashada ugu badan caalamka.
“Waxaannu gaadhnay bartilmaameedkii 2015-kii abbaarta ahaa oo dhammaa in 15 milyan oo bukaan ah dawada helaan, waxaanannu doonaynaa in tiradaas aan laban laabno oo 30 milyanka dhigno marka la gaadho 2020-ka.
Waannusiiwadidoonaadedaalkailaaintalagagadhaayo qof kasta oo xannuunkan la nool,” ayuu yidhi Mr. Sidibe oo ka mid ah madaxda UNAids, islamarkaana BBC u warramay.
Bariga iyo koonfurta Afrika oo ah meelaha ugu badan ee xannuunka AIDS aafeeyey waxa ka muuqata in hoos-u-dhac weyn ku yimi dadka uu ku dhaco laga soo bilaabo 2010-kii sida warbixinta lagu sheegay.
Hay’adda UNAids waxa qorshe u ah hawlgalka magaciisa la yidhaa ’90-90-901’ oo macnahiisu yahay in 90% dadka HIV qaada ay helaan adeeg caafimaad amma shaybaadh si 90% loodaaweey marka 2020-ka la gaadho.
Hay’adda Qaramada Midoobay u qaabilsan la-tacaalida AIDS waxa ay ka digtay in adeeg caafimaad oo liita ka jiro dalalka waqooyiga Afrika, bariga dhexe, Eeshiya iyo bariga Yurub, taasina ay sababtay in bukaanka xannuunkan u dhintaa bataan.
Arrintan ayaa sabab ah ah sida khubarada caafimaad sheegeen in dadka jinsiga la midka ah u galmoodaa (Gay men) ay sii faafiyaan xannuunka HIV-ga.